Hordhac: Man City Vs Bristol City: Mucjisadii Kabaha La Dulmartay Man United Oo Cidiyaha U Lisanaysa Man City – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac: Man City Vs Bristol City: Mucjisadii Kabaha La Dulmartay Man United Oo Cidiyaha U Lisanaysa Man City
Hordhac: Man City Vs Bristol City: Mucjisadii Kabaha La Dulmartay Man United Oo Cidiyaha U Lisanaysa Man City
Kooxda Man City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium ku soo dhawayn doonta kooxda Bristol City kulan ka tirsan wareega sem-finalka League cup-ka
Bristol City ayaa kulanka u soo galaysa in ay dhamaystiraan riyadooda ah finalka tartanka iyaga oo doonaya in ay Man city raaciyaan dariskeeda Man United oo ay horay u soo garaaceen.
Man city ayaa dhankeeda soo galaysa iyada oo doonaysa in ay sii wado qaab ciyaareedkeeda cajiibka ah iskana ilaalin doonta lama filaan uga yimaada kooxda Bristol City.
Kulanka: Man City Vs Bristol City
Tartanka: League Cup
Kulankan ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay ee labada kooxood tan iyo Man City kooxda Bristol 2/1 uga badisay iyada oo garoonkeeda joogta sanadkii August 2007.
Bristol City ayaa xilli ciyaareedkan tartanka ka reebtay 4 kooxood oo heerka sare ah kooxda kaliya ee sidaa samaysay ayaa ah kooxda Sheffield Wednesday xilli ciyaareedkii 1990-91.
Kulankan ayaa ah markii 5-aad oo xiriir ah oo ay kooxda Man city gaarto wareega semi-finalka tartanka League cup-ka waxa laga reebay koobka sanadihii 2010 iyo 2012 laakiin waxa ay sanadihii 2014 iyo 2016 dhaafeen wareegan wayna ku guulaysteen.
Kulankan ayaa ah markii ugu horaysay ee ay kooxda Bristol City wajahdo koox hogaanka u haysa horyaalka Premier league markii ugu dambaysay ee ay koox premier league hogaanka u haysa la ciyaarto ayaa ahayd 1995/1996 waxana soo gaartay guuldaro laba lugood ah oo dhan 8/1.
Kooxda Bristol City ayaa ah kooxda ugu goolasha badan tartanka League cup-ka xilli ciyaareedkan iyaga oo dhaliyay 16 gool halka city tahay kooxda ugu goolasha yar tartanka iyada oo kaliya dhalisay 3 gool.